के हो 'जात्रै जात्रा' ?
के हो ‘जात्रै जात्रा’ ?
प्रकाशित : सोमबार, बैशाख ३०, २०७६१४:२४
फिल्म । जात्रै जात्रा आउँदो शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउंदै छ । फिल्ममा सामान्य जीवन बिताइरहेका तिन पात्रले आकस्मिक धनलाभ गर्दा आउने परिस्थितिलाई देखाइएको छ । ‘जात्रा’ मार्फत दर्शक र समिक्षकको मन जितेको टिमले नै सिक्वेल लिएर आउंदैछ । यसलाई निर्देशकले पनि डबल डोज भनिरहेका छन् । प्रदीप भट्टराईको लेखन तथा निर्देशनमा तयार भएको फिल्मले अघिल्लो सिरिजको कौतुहलतालाई मेटाउनुका साथै नयाँ घटनासँग पनि दर्शकलाई जोड्छ । ‘हामीले पैसाको कौतुहलता मेटाउदै नयाँ टेस्ट पनि थपेका छौ’ निर्देशक भट्टराई भन्छन् ‘दर्शकका लागि फिल्म डबल डोज नै हो ।’
तर जात्रै जात्रा हो के ? यो प्रश्नमा फिल्मका युनिटको आ-आफ्नै भनाइ छ , तर समानता पूर्ण मनोरन्जनात्मक फिल्म । ‘देशको यथार्थ घटना हो यो फिल्म’ फिल्मका कलाकार राजाराम पौडेलले कुराकानीको क्रममा भने ‘फिल्मले अघिल्लो सिरिजका दर्शकलाई निराश बनाउछ जस्तो लाग्दैन ।’ राजाराम झैँ फिल्मकी कलाकार वर्षा राउत पनि सिक्वेललाई लिएर विश्वत छिन । ‘जात्रा हेरेकालाई यो मन नपर्ने कुरै छैन’ विश्वत हुँदै वर्षा भन्छिन् ‘नामले नै स्पष्ट पारेको छ , यसपटक झन् धेरै जात्रा छ ।’
टिममा भित्रिएका नयाँ सदस्य दयाहाङ राई अघिल्लो भागमै काम गर्ने सोचाइ भएपनि समय नमिले बताए । ‘जात्रामा काम गर्ने प्रस्ताव आएको थियो तर त्यबिलेला समय मिलेन’ दया भन्छन् ‘सिक्वेल जुरेको रहेछ , यसपटक त सबैलाई ढाटेर काम गरे ।’ उनलाई निर्माण पक्षले आफु फिल्ममा संलग्न भएको नबताउन आग्रह गरेका थिए । उनि टिजरमा सरप्राइजको रुपमा देखिए । उनि फिल्मको स्टोरीकै कारण आकर्षित भएको बताए । यसैगरी विपिन यसलाई पूर्ण ब्यबसायिक फिल्म भन्छन् । ‘फिल्ममा अघिल्लो सिरिज झैँ मेरो क्यारेक्टरले कन्टिन्युटी पाएको छ र यो पूर्ण ब्यबसायिक फिल्म हो’ विपिनले भने ।
यता कार्यकारी निर्मातासँगै फिल्मका एक कलाकार रविन्द्र सिंह बानियाँ भने यसलाई जीवनको उतारचढाव भन्छन् । ‘घटनाले निम्त्याउने परिस्थितिमा उत्पन्न हुने अवस्थालाई देखाएका छौ’ उनले भने । दर्शकको मनोरंजनको लागि सक्दो प्रयास गरेको उनि बताउछन् । फिल्ममा विपिन कार्की, दयाहाङ राई, रबिन्द्र झा, रबिन्द्र सिंह बाँनिया, बर्षा राउत , प्रियंका झा , राजाराम पौडेल लगायतका कलाकारहरुको पनि यसमा अभिनय छ । फिल्ममा शंकर महर्जन द्वन्द्व निर्देशन छ । निर्देशक भट्टराई आफैंको कथा रहेको फिल्ममा कालीप्रसाद बाँस्कोटा र कृष्ण भारद्वाजको संगीत छ ।
करणको शो मा ‘बाहुबली स्टार’ पाहुना ?
कबड्डी कबड्डी कबड्डीको बम्पर ओप्निङ
स्वस्तिमालाई बधाई , सार्क फिल्म फेस्टिभलमा जितिन् अवार्ड
सौरभको निर्देशनमा ‘पर्खि बसें २’ बन्ने
बादशाह जुटको ‘ससाइड’ गीत सार्वजनिक (भिडियो)